MoU ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့သော်လည်း အလုပ်မရဘဲ ပြန်ရောက်လာသည့် မြန်မာအလုပ်သမား ?? - Yangon Media Group
MoU ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့သော်လည်း အလုပ်မရဘဲ ပြန်ရောက်လာသည့် မြန်မာအလုပ်သမား ??
မြဝတီ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၂
ပြည်ပအလုပ် အကိုင်ရှာဖွေရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ MoU စာချုပ် ဖြင့် သွားရောက်ခဲ့သော မြန်မာအ လုပ်သမား ၃၈ ဦးသည်အလုပ်အ ကိုင် အဆင်မပြေဘဲပြန်လည်ရောက် ရှိလာခဲ့ကြပြီး နောက်အဆိုပါအလုပ် သမားများအား ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ သည့် ကုမ္ပဏီနှင့်နှစ်ရက်ကြာဆွေး နွေးညှိနှိုင်းပြီးနောက် နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ပြေလည် မှုရရှိသွားခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အလုပ်သမားများ သည် မြဝတီမြို့ရှိပြန်လည်ကြိုဆို ရေးစခန်းသို့နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိ လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီး ¤င်းတို့အားပို့ ဆောင်ပေးခဲ့သော ကုမ္ပဏီနှင့်နှစ် ရက်ကြာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ရာမှ နို ဝင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင်ယခုကဲ့သို့ ပြေလည်မှုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ကရင်ပြည်နယ်အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူပါ ဆင်းလာပြီးကုမ္ပဏီကတာ ဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြတဲ့အခါနှစ်ရက်ကြာခဲ့ပြီး အခုတော့တစ်ဦးကို ကျပ်ရှစ်သိန်းစီနဲ့ပို့ပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီကနစ်နာကြေးပြန်ပေးဖို့ သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ အ လုပ်သမားတွေက ကျေနပ်တယ်ဆို ပေမယ့်လည်း ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုအ သေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်ပြီး နေပြည် တော်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကို တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု မြဝတီ မြို့နယ်အလုပ်သမားညွှန် ကြားရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ခံအရာရှိ ဦးသန်းထိုက်ကပြောကြားသည်။
အဆိုပါညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြရာတွင် ကရင်ပြည်နယ်အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦး အောင်ကျော်မင်း၊ မြဝတီမြို့နယ် အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိဦးတင့်နိုင်၊ မြဝတီ မြို့ အလုပ်သမားဦးစီးဌာန ပြန်လည် ကြိုဆိုရေးစခန်း တာဝန်ခံအရာရှိ ဦးသန်းထိုက်၊ မြဝတီရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားဆိုင်ရာပူးပေါင်း ကော်မတီမှ ဦးအောင်မြတ်၊ ဦးမင်းထွန်းနှင့် အလုပ်သမားများပို့ဆောင် ပေးခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီမှဒါရိုက်တာ ဦးသိန်းနိုင်ထွန်းတို့မှ အလုပ်သမားများနှင့် ဆွေးနွေးကြပြီးနောက် အ လုပ်သမားများအား တစ်ဦးလျှင်ကျပ် ရှစ်သိန်းနှုန်းဖြင့် ၃၈ဦးအတွက် ကျပ် ၃ဝ၄သိန်းအား နစ်နာကြေး အဖြစ် ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် နှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါအလုပ်သမား ၃၈ဦး မှာ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဆင် ပေါင်ဝဲမြို့နယ် ဆင်မတောင်ကျေး ရွာမှဖြစ်ကြပြီး ထိုင်းနိုင်ငံသို့ MoU ဖြင့်အောက်တိုဘာ ၈ ရက် ကထွက်ခွာသွားခဲ့ကြသူများဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
မွန်ပြည်နယ် လူငယ်ရေးရာကော်မတီမှ ဦးဆောင်၍ သံဖြူဇရပ်မြို့ရှိ ဆံတော်တောင်သို့ လူငယ်များ တက??
ကမ္ဘာ့ရှားပါး ရေချိုလင်းပိုင် တစ်ကောင် ပိုက်ငြိသေဆုံးပြီးနောက် ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း ငါးဖမ်းသူ?
အံ့အားသင့်စရာများကို မက်ဆီ လုပ်ပြနေဆဲဟု ဗဲလ်ဗာဒီ ချီးကျူး
ဘိုးရင်း ၇၃၇ ဂျက်လေယာဉ် တချို့တွင် မှားယွင်းသော ပစ္စည်းများဖြင့် တပ်ဆင်ထားကြောင်း အမေရိကန်??
တရားမဝင် ကားများကို ထောက်လှမ်း ဖမ်းဆီးနိုင်မည့်မီးပွိုင့် စနစ်ကိုပြုပြင်နေပြီ၊ မကြာမီ ထိထ
မူဆယ်ခရိုင် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ရွှေလီမြို့ ဒုတိယ မြို့တော်ဝန်တို့ တွေ့ဆုံ၍ နှစ်?